OMG!!! Buraayyuu keessatti abiddi cimaan qabatee jira!!! – Welcome to bilisummaa
OMG!!! Buraayyuu keessatti abiddi cimaan qabatee jira!!!
bilisummaa May 2, 2014	1 Comment
OMG!!! Buraayyuu keessatti abiddi cimaan qabatee jira!!! Yeroo ammaa kanatti buraayyuu keessatti baankonnii,suuqiin akkasumas waajjiraaleen garaa garaa cufamanii jiru.kattaa irraa jalqabee hanga buraayyuutti dhukaasni banamee jira.uummati magaalaa buraayyuu fi barattoonni “uummati keenya nuuf jedhee dhumaa jira misooma uummati keenya hin feene nutis hin barbaannu jechuu dhaan mormii dhageessisaa jiru.
Akkasumas wallagga lixaa magaalaan Ayiraa mormii guddaa maaster pilaanii finfinnee irratti dhageessisaa jiru.odeeffannoo hedduutu nu qaqqabaa jira dabaree dhaan isiniif dabarsina. Buraayyuun garuu haala nama sodaachisu keessa jirti.uummati naannoo sana jiraatanis yeroo ammaa kana itti makamaa jiru!!!!!!!!
akkasumas Najjoo shaambuu fi gidaamii keessatti mormii guddaan adeemsifamaa jira!!!
Previous Waraabo tokko tokkoon akka durii akka nun nyaanne Oromiyaan isiin waamaa jirti !
Next SEENAAN HINDAGATUU !!!